KEDU ESI EKPUCHI SSD NA SSD - SSD - 2019
Otu esi eme ka ntụgharị SSD
Mgbe ị jikọtara onye nbipute ọhụrụ na kọmputa gị, ịkwesịrị ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị maka ya. Enwere ike ime nke a n'ụzọ anọ dị mfe. Onye ọ bụla n'ime ha nwere algorithm dị iche iche nke omume, n'ihi ya onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ nke kachasị mma. Ka anyị lebakwuo anya na ụzọ ndị a nile.
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka onye na-ebi akwụkwọ Canon LBP-810
Onye nbipute ahụ agaghị enwe ike ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala, yabụ ịchọrọ ha achọrọ, onye ọrụ ọ bụla kwesịrị ime bụ ịchọta ma budata faịlụ ndị dị mkpa na kọmputa. Emere ya onwe ya n'onwe ya.
Usoro 1: Website Canon
Ndị niile na-emepụta ihe na-ebipụta akwụkwọ nwere ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ebe ọ bụghị nanị na ha na-eziga ozi ngwaahịa, mana na-enye nkwado maka ndị ọrụ. Ngalaba enyemaka nyere software niile metụtara ya. Download Canon LBP-810 faịlụ dịka ndị a:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Canon
Gaa na saịtị Canon.
Họrọ ngalaba "Nkwado".
Pịa na akara "Nbudata na Enyemaka".
Na mepee taabụ, ị ga-enwerịrị aha onye na-ebipụta akwụkwọ ahụ na akara ma pịa nchọta a chọtara.
A na-ahọrọ sistemụ arụmọrụ na-akpaghị aka, ma nke a anaghị eme mgbe niile, n'ihi ya ị ga-achọ iji nyochaa ya na eriri kwekọrọ. Kọwaa ụdị osụhọ nke OS, echefughị ​​banyere bit, dịka ọmụmaatụ Windows 7 32-bit ma ọ bụ 64-bit.
Pịgharịa gaa na taabụ ebe ịchọrọ ịchọta nsụgharị kachasị ọhụrụ nke ngwanro wee pịa "Download".
Nabata usoro nke nkwekọrịta wee pịa ọzọ "Download".
Mgbe nbudata zuru ezu, mepee faịlụ a ebudatara, a ga-arụkwa ya na akpaghị aka. Onye nbipute ahụ dị njikere maka ọrụ.
Usoro 2: Software iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
N'Ịntanet, e nwere ọtụtụ mmemme bara uru, n'etiti ha enwere ndị ọrụ ha na-elekwasị anya ịchọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Anyị na-akwado iji software a mgbe ejiri kọmpụta jikọọ ya. Akụrụngwa ga-emepụta nyocha ahụ n'onwe ya, chọta ngwaike ma budata faịlụ ndị dị mkpa. Na isiokwu na njikọ dị n'okpuru ị ga-ahụ ndepụta nke ndị nnọchiteanya kasị mma nke ngwanrọ dị otú ahụ.
Otu n'ime ihe omume ndị dị otú ahụ kachasị ewu ewu bụ ihe DriverPack. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile n'otu oge. Otú ọ dị, ịnwere ike ịwụnye naanị ngwa nbipute. Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka ijikwa DriverPack Solution na isiokwu anyị ọzọ.
Gụkwuo: Otu esi emelite ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa gị site na iji DriverPack Solution
Nzọụkwụ 3: Chọọ NJ ngwaike
Ihe ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ejikọrọ na kọmputa nwere ọnụ ọgụgụ ya nke enwere ike iji chọọ ndị ọkwọ ụgbọala yiri ya. Usoro n'onwe ya adịghị mgbagwoju anya, ị ga-ahụkwa faịlụ kwesịrị ekwesị. A kọwara ya n'ụzọ zuru ezu na ihe ndị ọzọ anyị.
Usoro 4: Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Windows
Windows sistemụ arụmọrụ nwere ọrụ na-enye gị ohere ịchọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Anyị na-eji ya itinye usoro maka onye nbipute Canon LBP-810. Soro ntuziaka ndị a:
Meghee "Malite" ma gaa "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ".
Na n'elu pịa "Wụnye Mbipụta".
A windo meghere na ụdị ụdị ngwa. Detuo ebe a "Tinye onye nbipute mpaghara".
Họrọ ụdị ọdụ ụgbọ mmiri eji ma pịa "Na-esote".
Chere maka ndepụta nke ngwaọrụ. Ọ bụrụ na achọtaghị ozi dị mkpa na ya, ị ga-achọ ịchọrọ ọzọ site na Windows Update Center. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
N'akụkụ aka ekpe, họrọ onye na-emepụta ya, na n'aka nri - ihe nlereanya ahụ ma pịa "Na-esote".
Tinye aha nke akụrụngwa. Ị nwere ike ide ihe ọ bụla, mana ahapụla akara ahụ efu.
Ọzọ ga-amalite ọnọdụ nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ. A ga-amara gị ọkwa banyere njedebe nke usoro a. Ugbu a, ị nwere ike gbanwee ihe nbipute ahụ wee banye ọrụ.
Dịka ị nwere ike ịhụ, ịchọta onye ọkwọ ụgbọala achọrọ maka ngwa ngwa nke Canon LBP-810 dị mfe, ma e wezụga nhọrọ dịgasị iche iche ga-enye onye ọrụ ọ bụla aka ịhọrọ usoro kwesịrị ekwesị, mezue nwụnye ngwa ngwa ma gaa rụọ ọrụ na ngwa ahụ.